Jabuuti oo 1 malyan oo dollar ugu deeqday dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxii Zobbe (Sawiro) – Xeernews24
Jabuuti oo 1 malyan oo dollar ugu deeqday dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxii Zobbe (Sawiro)
21. November 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Dowlada Jabuuti ayaa ku wareejisay deeq lacageed oo gaadheysa hal malyan oo dollar gudiga qaran ee gurmadka iyadoo lacagtaana ay tahay mid lagu gargaarayo dadkii waxyeeeladu ka soo gaadhay qaraxii ka dhacay Muqdisho 14kii Oktoobar ee sanadkan.
Wareejinta deeqda lacageed ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre,waxaana Danjiraha Jabuuti ee Soomaaliya Aadan Xasan Aadan oo lacagtaasi ku wareejiyay guddiga gurmadka Qaran uu sheegay in ay tahay lacag ay iska soo uruuriyeen shacabka reer Jabuuti oo ka damqaday walaalahooda dhibaataysan.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan uu ku hadlay magaca guddiga ayaa sheegay in ay guddoomeen deeqdaasi lacageed islamarkaana lagu taakulayn doono dadkii musiibadaasi saameysay waxana uu u mahadceliyay dowlada Jabuti.
Ugu dambeyntii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ku hadlayay magaca dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa uga mahadceliyay Dowladda iyo Shacabka reer Jabuuti sida walaaltinimada leh oo ay u garab taagan yihiin Soomaaliya.
Dowladda Jabuuti ayaa kamid ah dowladihii ugu horeyeey oo gargaar isugu jira dawooyin iyo dhaqaatiir gurmad ahba u soo direy Soomaaliya maalmo kadib markii uu dhacay qarixii zoobe,kaasi oo ay ku dhinteen boqolaal qof kuwo kalena ay ku dhaawacmeen.
Deeq la guddoonsiiyay Guddiga Gurmad Qaran.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/deeq3.jpg 480 638 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-11-21 01:28:272017-11-21 01:28:27Jabuuti oo 1 malyan oo dollar ugu deeqday dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxii Zobbe (Sawiro)
Daawo Eng Faysal Cali Waraabe Oo Markii Ugu Horaysay Si Adag Uga Hadlay. Daawo Qaar ka mid ah jaaliyadda reer Saylac iyo Lughaya ee jabuuti ku dhaqan...